ဂျက်ကီချန်း ချန်လုံသည် ဟောင်ကောင် စတန့်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ တေးသံရှင်လည်းဖြစ်သလိုရုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ချန်းအား ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီပိုင်နယ်ဖြစ်သော ဟောင်ကောင်၊ ဝိတိုရိယတောင်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၅၄-ခု၊ ဧပြီလ ရက်နေ့၌ ဟောင်ကောင်တွင် ဖခင် ချာလီ နှင့် မိခင် လီလီချန်း တို့မှ တရုတ်ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ချန်းအား မွေးဖွားပြီး မှည့်ထားသော အမည်မှာ ချန်းကောင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အခြား အမည်ပြောင်တစ်ခုမှာ ပွာပွာ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ မိခင်၏ဗိုက်ထဲတွင် ဂျက်ကီချန်း၏ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၁၂-ပေါင်ရှိနေသဖြင့် ခွဲစိတ်မွေးဖွားရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိဘများသည် အလွန်ဆင်းရဲသဖြင့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများမှ ခွဲစိတ်ခကို ချေးငှားကာ မွေးဖွားရ၏။ ဖခင်သည် ဟောင်ကောင်ရှိ ပြင်သစ်သံရုံးတွင် ထမင်းချက်ဖြစ်ပြီး မိခင်သည် အိမ်ဖော်အလုပ် လုပ်ရသည်။
1. အစောပိုင်း စွန့်စားခန်းများ- 1976–1979
၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်၊ Jackie Chan ဂျက်ကီချန်းသည် Willie Chan ဝီလီချန်း ထံမှ ကြေးနန်းတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုလူမှာ ဟောင်ကောင်မှ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Chan ချန်း၏ ရုတ်ရှင်စတန့်များကို အထင်ကြီးသဘောကျနေသူဖြစ်သည်။ Willie Chan ဝီလီချန်းသည် သူ့အား ဒါရိုက်တာ Lo Wei လိုဝေး ရိုက်ကူးသည့် ရုပ်ရှင်တစ်ခုတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းသည်။ Loလိုသည် Chan ချန်း၏ သရုပ်ဆောင်မှုကိုJohn Woo ဂျွန်ဝူး ရုပ်ရှင် Hand of Death သေခြင်း၏ လက်တကမ်း ၁၉၇၆ တွင် တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်ပြီး New Fist of Fury ဒေါသလက်သီး အသစ် ဖြင့် Chan ချန်း အား Bruce Lee ဘရုစ်လီ) ပုံစံသွင်းကာ စင်တင်ပေးရန် စီစဉ်ထားသည်။ သူ၏ ဇာတ်ဆောင်အမည်ကို Sing Lung စင်းလုံ - ကွမ်တုန်းအသံထွက်ဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည် တရုတ်ဘာသာဖြင့်-成龍 ချန်လုံ - ရုံးသုံး တရုတ်စာ အသံထွက် ဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက်အားဖြင့် "နဂါးဖြစ်လာသည်" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်)။ ၎င်းမှာ သူနှင့် Bruce Lee ဘရုစ် လီ) တရုတ်ဘာသာဖြင့်- 李小龍, လီရှောင်လုံ "နဂါးလေး" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်) တို့၏ တူညီသောအချက်များကို အလေးထားအသားပေးရန် ဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်မှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ Chan ချန်းသည် Lees လီ၏ ကိုယ်ခံပညာ ကစားနည်း ကစားဟန်နှင့် နေသားတကျရှိနေခြင်း မရှိသေး၍ဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်မအောင်မြင်သော်လည်း၊ Lo Wei လိုဝေးသည် အလားတူ ဇာတ်လမ်းများဖြင့် ရုပ်ရှင်များကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ ရုံဝင်ခရငွေ တိုးတက်မှု မရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။
Chan ချန်း ၏ပထမဆုံးသော အဓိကအောင်မြင်မှုသည် Seasonal Film Corporation ရာသီအလိုက် ရုပ်ရှင်ကော်ပိုရေးရှင်း သို့ ရုပ်ရှင်နှစ်ကား သဘောတူညီချက်တစ်ခုအရ ငှားရမ်းခြင်းခံနေရစဉ်တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော 1978 ရုပ်ရှင် Snake in the Eagles Shadow သိမ်းငှက်အရိပ်အောက်မှမြွေ ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Yuen Woo-ping ယွန်ဝူးပင် လက်အောက်တွင် Chan ချန်းသည် သူ၏စတန့်အလုပ်ကို ပြုလုပ်ရန် လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အဝရှိသည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် ဟာသကွန်ဖူးအမျိုးအစားကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင် ပရိသတ်အတွက် အသစ်အဆန်း တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ Chan ချန်းသည် ထို့နောက် Drunken Master အရက်မှူးနေသော သခင် တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် နောက်ဆုံးတွင်သူ့အား ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွင် အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ဆီသို့ တွန်းပို့ခဲ့သည်။
Lo Weisလိုဝေး ၏ စတူဒီယိုသို့ Chansချန်း ၏ ပြန်ရောက်ခြင်းအပေါ်တွင် အခြေပြု၍ Loလိုသည် Drunken Master အရက်မှူးနေသော သခင် ၏ ဟာသချဉ်းကပ်မှုကို ပုံတူကူးချရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး HalfaLoaf of Kung Fu ကွန်ဖူးပညာတစ်ဝက် နှင့် Spiritual Kung Fu စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ဖူး တို့ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ သည်။ သူသည် Chan ချန်းအား Kenneth Tsang ကက်နက် ဆန် နှင့်အတူThe Fearless Hyena အကြောက်တရားကင်းမဲ့သော ခွေးအ ကိုပူးတွဲဒါရိုက်တာပြုလုပ်ရန် အခွင့်အရေးကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ Willie Chan ဝီလီချန်း ကုမ္ပဏီမှ ထွက်သွားသောအခါ သူသည် Jackie ဂျက်ကီအား Lo Wei လိုဝေး နှင့် နေမည်၊ မနေမည်ကို သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။
Fearless Hyena Part II အကြောက် တရား ကင်းမဲ့ သောခွေးအအပိုင်း II ရိုက်ကူးနေစဉ် Chan ချန်းသည် သူ၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့ပြီး Golden Harvest ရွှေရောင် အကျိုးဆက် ကိုပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်မှာ Loလို အား Chanချန်းကို လျှို့ဝှက်ဒုစရိုက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်ရန်နှင့် Willie ဝီလီအားသူ၏ ထူးချွန်သော သရုပ်ဆောင် ထွက်သွားမှုအတွက် အပြစ်တင်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအငြင်းပွားမှုသည် အဖော်သရုပ်ဆောင်နှင့် ဒါရိုက်တာ Jimmy Wang Yu ဂျင်မီဝေါင်းယု တို့၏အကူအညီဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပြီး Chanချန်း အား Golden Harvest ရွှေရောင်အကျိုးဆက် တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
3. တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှု ဟာသအမျိုးအစားအောင်မြင်မှု- 1980–1987
Willie Chan ဝီလီချန်း သည် Jackies ဂျက်ကီ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမန်နေဂျာနှင့် ကုမ္ပဏီသူငယ်ချင်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်တိုင်အောင် ထိုအတိုင်းဆက်လက် တည်ရှိနေခဲ့သည်။ သူသည် Chans ချန်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းကို စတင်ရာတွင်အရေးပါပြီး 1980 နှစ်များတွင် American film industry အမေရိကန် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း အတွင်းသို့ သူ၏ပထမဆုံးချဉ်းနင်း ဝင်ရောက်မှုများ ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဦးဆုံးသော Hollywoodဟောလီဝုဒ် ရုပ်ရှင်မှာ1980 တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော Battle Creek Brawl ချောင်းငယ်အတွက် ရန်ပွဲမှ စစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။ Chan ချန်းသည် ထို့နောက်တွင် 1981၌ရိုက်ကူးခဲ့သော The Cannonball Run အမြောက်ဆန် လမ်းကြောင်း ရုပ်ရှင်တွင် အရေးမပါသောအခန်းမှပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ထိုရုပ်ရှင်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 100 ရရှိသည်။ အခြေကျနေပြီဖြစ်သော Burt Reynolds ဘတ် ရေးနိုးစ်) ကဲ့သို့သော အမေရိကန် သရုပ်ဆောင်များကို နှစ်သက်သည့် ပရိသတ်များ၏ အဓိကအားဖြင့် မသိကျေးကျွန်ပြုခြင်းကို ခံရသော်လည်း ရုပ်ရှင်အပြီးတွင်ဖော်ပြသော ပါဝင်သူများအမည်စာရင်း ဖလင်အပိုင်းအစများသည် Chanချန်း အား အထင်ကြီး အားကျခြင်းဖြစ်စေပြီး သူ၏နောက်ရိုက်ကူးသော ရုပ်ရှင်များတွင် ထိုစက်ကိရိယာကို ထည့်သွင်းရန် သူ့အားလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
1985 တွင်ရိုက်ကူးသော The Protector ကာကွယ်ပေးသူ ရုပ်ရှင်၏ စီးပွားရေးအရအောင်မြင်မှု မရရှိသည့် နောက်တွင် Chanချန်းသည် အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်ဟူသော သူ၏ ကြိုးစားမှုများကို ယာယီစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး Hong Kong films ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ဆီသို့ သူ၏အာရုံစိုက်မှုကို ပြန်လည်လှည့်လည်ခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်သို့ ပြန်ရောက်ပြီးနောက်တွင်The Young Master ငယ်ရွယ်သော သခင် 1980 နှင့် Dragon Lord နဂါးမင်းကြီး 1982 တို့အပါအဝင် အကျိုးအမြတ်များသော ဂျပန်ဈေးကွက်တွင် အစောပိုင်းအောင်မြင် မှုများနှင့်အတူ Chans ချန်း ၏ ရုပ်ရှင်များသည် အာရှအရှေ့ပိုင်း ရှိပရိတ်သတ်အများစုထံသို့ စတင်ရောက် ရှိခဲ့သည်။ The Young Master ငယ်ရွယ်သော သခင် သည် Bruce Lee ဘရုစ်လီ) ၏ ယခင် ရုပ်ရှင်လက်မှတ် အရောင်းစံချိန်များထက် ကျော်လွန်ခဲ့ပြီး Chan ချန်း အား ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်လောက၏ ထိပ်တန်းကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် စတင်စေခဲ့သည်။ Chan ချန်းသည် သူ၏အော်ပရာကျောင်းမှ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော Sammo Hung ဆာမို ဟန်နှင့် Yuen Biao ယူအန် ဘာရီအို တို့နှင့်အတူ တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှု ဟာသရုပ်ရှင်အများအပြားကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
1983 တွင် Project A ပရိုဂျက် အေ ဇာတ်ကားတွင် ထိုသုံးယောက်သည် ပူးတွဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းရုပ်ရှင်သည်တတိယအကြိမ်မြောက်နှစ်စဉ် Hong Kong Film Awardsဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား တွင် အကောင်းဆုံး တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှု ဒီဇိုင်းဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ နောက်နှစ်နှစ်အပြီးတွင် "ညီနောင်သုံးဖော်" သည် Wheels on Meals အစားအစာပေါ်မှ ဘီးများ နှင့် Lucky Stars ကံကောင်းသော ကြယ်ပွင့်များ မူလသုံးတွဲဇာတ်အော်ပရာဇာတ်လမ်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
1985 တွင် Chanချန်း သည် ပထမဆုံးသော Police Story ရဲဇာတ်လမ်း ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ၎င်းရုပ်ရှင်သည် အမေရိကန်ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိသော တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုရှိသည့် ဟာသဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Chan ချန်း သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင် စတန့်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို 1986 ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်" အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။1987 တွင် Armour of God ဘုရားသခင်၏ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ ရုပ်ရှင်၌ Indiana Jones အင်ဒီရာနာ ဂျုံးစ်) ၏ဇာတ်ကောင်စရိုက် ဟန်ရှိသော "အာရှ သိမ်းငှက်"ကို Chanချန်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Chansချန်း ၏ ယနေ့တိုင်အောင် အကြီး မားဆုံးသော ပြည်တွင်းလက်မှတ် အရောင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 35 သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။
4. ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသော နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းများနှင့် ဟောလီးဝုဒ် အောင်မြင်မှုများ- 1988–1998
1988 တွင် Chanချန်းသည် Dragons Forever ထာဝရ နဂါးများ ရုပ်ရှင်တွင် Sammo Hung ဆာမို ဟန်နှင့် Yuen Biao ယူအန် ဘာရီအို တို့နှင့်အတူ ယနေ့အထိတိုင်အောင် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Hung ဟောင်း သည် Corey Yuen ကိုရေး ယူအန် နှင့်အတူ ဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့ပြီး Yuen Wah ယူအန် ဝါ သည် လူကြမ်းအဖြစ် ရုပ်ရှင်ထဲတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် တရုတ်ဇာတ်လမ်းများ အထူးပညာရပ်သင်တန်းကျောင်းမှ ဘွဲ့ရရှိသူများဖြစ်သည်။
1980 နှောင်းပိုင်းနှစ်များနှင့် 90 အစောပိုင်းနှစ်များတွင် Chan ချန်းသည် Police Story2ရဲဇာတ်လမ်း2နှင့်စတင်၍ အောင်မြင်သောနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း အများအပြားတွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုဇာတ်လမ်းသည် 1989 Hong Kong Film Awards ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား တွင် အကောင်းဆုံး တက်ကြွလှုပ်ရှားမှု စီစဉ်ဖန်တီးခြင်း အတတ်ဆိုင်ရာဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 1993 Golden Horse Film Festival ရွှေရောင်မြင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် တွင် အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုကို Chan ချန်း ရရှိခဲ့သည့် Armour of God II ဘုရားသခင်၏ ချပ်ဝတ်တန်ဆာII- Operation Condor လင်းတအကြီးစားစစ်ဆင်ရေး နှင့် Police Story3ရဲဇာတ်လမ်း3တို့နောက်တွင်ဖြစ်သည်။
Time Magazines တိုင်းမ်စ် မဂ္ဂဇင်း) ၏ အမြဲတမ်းရုပ်ရှင် 100 စာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် 1994 တွင်ရိုက်ခဲ့သော Drunken Master II အရက်မူးနေသောသခင် II ရုပ်ရှင်တွင် Chanချန်း သည် သူ၏ဇာတ်ဆောင်အခန်းအား Wong Fei-hung ဝေါင် ဖီဟောင်း အဖြစ်ပြန်လည်အသက်ဝင် စေခဲ့သည်။ အခြားနောက်ဆက်တွဲ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Police Story4ရဲဇာတ် လမ်း 4- First Strike ပထမ တိုက်ခိုက်မှု သည် Chanချန်း အတွက် ပြည်တွင်း ရုပ်ရှင်လက်မှတ်အရောင်း အောင်မြင်မှုများနှင့် နောက်ထပ်ဆုများကို ရရှိစေခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များတွင်မူ အခကြေးငွေ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိခြင်းမရှိပါ။ Jackie Chan ဂျက်ကီ ချန်း သည် သူ၏ Hollywood ဟောလီဝုဒ် ရည်မှန်းချက်များကို 1990 နှစ်များတွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေခဲ့သော်လည်း ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်များတွင် လူကြမ်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် အစောပိုင်းကမ်းလှမ်းချက်များကို အနာဂတ် သရုပ်ဆောင်အခန်းများတွင် ထိုလူကြမ်းအခန်းများသာ သရုပ်ဆောင်ရမည့် အခြေအနေကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် လက်မခံခဲ့ပေ။
ဥပမာအားဖြင့် Demolition Man ချေဖျက်ခြင်းခံရသည့် လူ ခေတ်ရှေ့ပြေးလွန်းသောရုပ်ရှင်တွင် တရားခံတစ်ဦးဖြစ်သည့် Simon Phoenix ဆိုင်မွန် ဖီးနစ်စ်) နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် Sylvester Stallone ဆိုင်ဗက်စ်တာ စတာလုန်း)သည် Chan ချန်းအား ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Chanချန်း သည် ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး Wesley Snipes ဝက်စ်လီ ဆနိုက်ဖ်) သည်ထိုသရုပ်ဆောင်အခန်းကို တာဝန်ယူ ခဲ့သည်။.Chanချန်း သည် တစ်ကမ္ဘာလုံး အနှံ့ဖြန့်ချိခဲ့သော Rumble in the Bronx ရှုတ်ချသံများ မြည်ဟည်းခြင်း ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ မြောက်အမေရိကဈေးကွက်တွင် 1995 ၌ခြေကုပ်တစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်ရာတွင် နောက်ဆုံး၌ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင် အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများအတွက် ရှားရှားပါးပါးဖြစ်သည့် အရူးအမူးစွဲလန်းမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရရှိခဲ့သည်။
Rumble in the Bronx ရှုတ်ချသံများ မြည်ဟည်းခြင်း ၏အောင်မြင်မှုသည် 1996 တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၌ ဖြန့်ချိခဲ့သော အထူးရဲခေါင်းစဉ် အောက်ရှိ Police Story3ရဲဇာတ်လမ်း3ဖြန့်ချိခြင်းကို ဦးတည်စေခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ 16.270.600 ရရှိခဲ့သည်။ Jackies ဂျက်ကီ၏ ပထမဦးဆုံးသော ကြီးမားသည့် လူကြိုက်အများဆုံး ရုပ်ရှင်အောင်မြင်မှုသည် 1998 တွင်ရိုက်ကူးသော Rush Hourလမ်းသွားလမ်းလာ ရှုပ်ထွေးသော ရုံးတက် ရုံးဆင်းချိန် တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှု ဟာသဇာတ်လမ်းတွင် ရဲဇာတ်ကောင်အဖြစ်Chris Tucker ခရစ်စ် တာ့ကာ) နှင့် ပူးတွဲသရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တစ်ခုတည်းတွင်ပင် စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ 130 သန်းရရှိခဲ့သည်။
ထိုရုပ်ရှင်သည် Jackie Chan ဂျက်ကီး ချန်း အားဟောလီဝုဒ်တွင် ကြယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျော်ကြားမှု စတန့်တစ်ခုအနေဖြင့် Jackie ဂျက်ကီသည် သူ၏ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိကို Jeff Yang ဂျက်ဖ် ယန်) နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ရေးခဲ့ပြီး I Am Jackie Chan ကျွန်ုပ်သည် ဂျက်ကီချန်းဖြစ်သည် ဟု ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ပြဇာတ်၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခြင်းနှင့် ဟောလီဝုဒ်တွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု- 1999– မှယခုအထိတိုင်ဖြစ်သည်။
1998 တွင် Chan ချန်း သည် Golden Harvest ရွှေရောင် အကျိုးဆက် အတွက် သူ၏နောက်ဆုံးရုပ်ရှင် ဖြစ်သော Who Am I? ငါဘယ်သူလဲ ရုပ်ရှင်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 1999 တွင် Golden Harvest ရွှေရောင် အကျိုးဆက် မှထွက်ခွာပြီးနောက် သူသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်သွယ်ခြင်းများကို အာရုံထားသည့် အချစ်ဟာသ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သော Gorgeous ခမ်းနားထည်ဝါသော ရုပ်ရှင်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Chanချန်းသည် ထို့နောက်တွင် Jackie Chan Stuntmaster ဂျက်ကီချန်း စတန့်မင်းသား ဟုခေါ်သည့် PlayStation ပလေး စတေရှင် ဂိမ်းကို 2000 တွင်ကူညီ၍ ဖန်တီးခဲ့ပြီး သူ၏အသံကို ငှါးရမ်းခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှု ဖမ်းယူခြင်းတို့ကို သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
5. Rob-B-Hoodရော်-ဘီ-ဟုဒ် ဇာတ်လမ်း
2000 ခုနှစ်တွင် Shanghai Noon ရှန်ဟိုင်း မွန်းတည့်ချိန် ၊ 2001 ခုနှစ်တွင် Rush Hour2လမ်းသွားလမ်း လာရှုပ်ထွေးသော ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန် နှင့် 2003 ခုနှစ်တွင် Shanghai Knights ရှန်ဟိုင်း သူရဲကောင်းများ တို့ဖြင့် နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သော်လည်း သရုပ်ဆောင်အခန်းကန့်သတ်ချက်ရှိသော အပိုင်းအခြား နှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Chan ချန်း သည် ဟောလီဝုဒ်တွင် အဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့သည်။2003 ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှ Golden Harvests ရွှေရောင် အကျိုးဆက် နုတ်ထွက်ခြင်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Chan ချန်းသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သော JCE Movies Limited Jackie Chan Emperor Movies Limited ဂျက်ကီချန်းအင်ပါယာ ရုပ်ရှင် လီမီတက် ကို Emperor Multimedia Group EMG အင်ပါယာ မာတီမီဒီယာ ဂရုပ် နှင့်တွဲဖက်ပြီး စတင်ခဲ့သည်။
လက်မှတ်အရောင်းရုံများတွင် ဆက်လက်၍ အောင်မြင်နေစဉ် သူ၏ရုပ်ရှင်များသည် ထူးခြားကောင်းမွန်သော ရိုက်ကွင်းများကို တိုး၍ရိုက်ကူးသည်- ဥပမာများမှာ New Police Story ရဲဇာတ်လမ်းအသစ် 2004၊ The Myth ဒဏ္ဍာရီ 2005 နှင့် ပေါက်သွားသော ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် Rob-B-Hood ရော်-ဘီ-ဟုဒ် 2006 တို့ဖြစ်သည်။ Chans ချန်း ၏နောက်ဖြန့်ချိခြင်းသည် 2007 ဩဂုတ်လတွင် Rush Hour3လမ်းသွားလမ်းလာရှုပ်ထွေး သော ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်3ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ 255 သန်း ရရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ထိုရုပ်ရှင်သည် ဟောင်ကောင်တွင် ၎င်း၏အဖွင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရက်များအတွင်းတွင် ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ စုစုပေါင်း 3.5 သန်းသာ ရရှိခဲ့သည်။
Chans ချန်း နှင့် တရုတ် ကွန်ဖူးမင်းသား Jet Li ဂျက်လီ တို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အတူတကွ ရိုက်ကူးသည့် The Forbidden Kingdom တားမြစ်ထားသော မင်းနေပြည်တော် ရုပ်ရှင်သည် ၂၀၀၇ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီး 2008 ဧပြီလတွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Chan ချန်း သည် ၂၀၀၈ ဇွန်လတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော DreamWorks Animation အိပ်မက်ဖန်တီးရှင် ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်သည့် Kung Fu Panda ကွန်ဖူး ဝက်ဝံ တွင် မျောက်ဆရာကြီးအဖြစ် အသံအပိုင်းမှ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကားတွင် အခြား ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သည့် Jack Black ဂျက်ဘလက်ခ်)၊ Dustin Hoffman ဒက်စတင် ဟော့ဖ်မန်း) နှင့် Angelina Jolie အိန်ဂျလီနာ ဂျိုလီ တို့လဲ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတဖြစ်လဲ ဒါရိုက်တာ Anthony Szeto အန်တိုနီ ဇက်ဒို ၏ ၂၀၀၈ မေ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည့် ရုပ်ရှင် Wushu ဝူရှုး တွင် အကြံပေးအနေဖြင့် အကူအညီပေးခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် Sammo Hung ဆာမို ဟန်နှင့် Wang Wenjie ဝမ် ဝန်ဂျယ် တို့က သားအဖအဖြစ် သရုပ်ထားသည်။
၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာလ တွင် Chan ချန်းသည် Shinjuku Incident ရှင်ဂျုကု ဖြစ်ရပ် ကို ဒါရိုက်တာ Derek Yee ဒီရိခ် ရီ နှင့်စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ထိုဇာတ်လမ်းတွင် Chanချန်းသည် ဂျပန်သို့ ဝင်ရောက်လာသော တရုတ် ရွှေ့ပြောင်းသူတစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရသည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကို ၂၀၀၉ ဧပြီလ ၂ ရက်တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သူ၏ blog ဘလော့ဂ် အရ၊ Shinjuku Incident ရှင်ဂျုကု ဖြစ်ရပ် ပြီးစီးပြီးနောက်တွင် Chan ချန်း သည် ယခင်က မရိုက်ကူးခဲ့ဖူးသေးသည့် အကြောင်းအရာများကို ရိုက်ကူးရန် ဆန္ဒရှိသည်ဟု သိရသည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Armour of God ဘုရားသခင်၏ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ အတွဲတွင် တတိယမြောက် ဖြစ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီး ဇာတ်ကားအမည်မှာ Armour of God III ဘုရားသခင်၏ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ III- တရုတ်ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်စက်ဝိုင်း ဟုခေါ်သည်။ Chan ချန်းသည် မူလက ၂၀၀၈ ဧပြီလ ၁ ရက်တွင် စရိုက်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ထိုရက်စွဲသည် ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဟောလိဝုဒ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာများ သပိတ်မှောက်ပွဲတွင် သရုပ်ဆောင်များ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် Chan ချန်းသည် သူ၏ နောက်ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကား The Spy Next Door ဘေးအိမ်က သူလျှို ကို အောက်တိုဘာလအကုန်တွင် New Mexico နယူး မက္ကဆီကို ၌စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Armour of God III ဘုရားသခင်၏ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ III- တရုတ်ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်စက်ဝိုင်း၏ အခြေနေကို မပြီးပြတ်သေးဘဲ ထားရှိသည်။
The Spy Next Door ဘေးအိမ်က သူလျှို တွင် Chan ချန်း သည် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးအေးဂျင့်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရပြီး သူသည် သူ့ချစ်သူ၏ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ရသောအခါ သူ၏လျှို့ဝျက်ချက်သည် ဖော်ထုတ်ခြင်းခံရသည်။ Chan ချန်း သည် Warring States Period တရုတ်ပြည် စစ်ပြိုင်ခေတ် ကို အခြေခံသော Little Big Soldier တပ်သားကြီး ဗိုလ်မှူးငယ် ဇာတ်ကားတွင် သိုင်းပညာ အခြေခံမရှိသည့် အဆိုတော် မင်းသား Leehom Wang လိဟုန် ဝမ် နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 2009 ဇွန်လ 22 ရက်တွင် Chan ချန်းသည် The Karate Kid ကာရာတေး ကောင်လေး ကို စတင်ရိုက် ကူးရန် Los Angeles လော့စ် အိန်ဂျယ်လိစ်) သို့ ထွက်ခွါခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖြန့်ချိသည့် ထိုရုပ်ရှင်သည် Beijing ပေကျင်း တွင်ရိုက်ကူးခဲ့သော မူရင်းရုပ်ရှင်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Jackie Chan Store official
Jackie Chans official Facebook Page
Jackie Chans Kids Corner official